Fomba handresena ny mpanjifa mba hividy Content'ny SEO
Maro amin'ireo orinasa no mitazona ny heviny fa afaka mandoa vola amin'ny votoaty izy ireo fa tsy mahagaga fa tsy mahalaza ny bolongany ary amin'ny farany, tsy mahalafo ny vokatra. Mihamitombo ny isan'ireo mpanaraka ny media sosialy, saingy tsy mahavita mandroso azy ireo ny sampan-draharaha ara-barotra ao amin'ny Internet.
Votoatin'ny votoaty ny votoatin'ny orinasa, saingy mbola mampiavaka ny lanjany ny orinasa Max Bell, ny Semalt Manager Success Manager, dia manazava ny antony maha-zava-dehibe ny tranonkala iray hanome votoaty lehibe.
Ny fiantraikany halo
Raha manana votoatiny ratsy ny sehatra ao amin'ny tranonkalanao, dia hampivoatra ny fiheverana fa ratsy ny vokatrao - optimum moisture content means. Ny psikolojika, ny valiny halo dia manazava ny antony mahatonga ny olona mijery tarehy matetika antsoina hoe mendri-pitokisana. Midika izany fa raha tsara ny votoatinao, dia hieritreritra ihany koa ny mpamaky fa tsara ny vokatrao.
Ny vokatra halo dia manan-danja ihany rehefa mahamarika ny olona ianao ary raha toa ka olon-tsotra ny votoatinao, dia tsy hisy olona hanaiky anao. Ny tranonkala dia tendrombohitra iray misy votoaty mahazatra, izay tsy dia mahaliana loatra ary tsy voasoratra an-tsoratra. Ny mpanoratra mora entinao dia tsy hanampy anao handresy ny mpihaino anao satria ny olona dia hisafidy toerana hafa izay manana votoaty tsara.
Ny votoatin-kaonty midadasika dia tsy hahazo rohy mankany
Raha mampiasa vola be amin'ny dokam-barotra ianao ary rehefa misy olona miditra ao amin'ny tranokalanao dia manapa-kevitra fa tsy mifanaraka aminy izany, dia tsy mendrika ny fampiasam-bola. Amin'ny votoatin-java-bidy lehibe, afaka hahasarika mpividy sy mpamaky mandritra ny fotoana marobe ianao.
Ny votoatiny mampatahotra dia misy tongotra. Tsy misy ny dokam-barotra
Amin'ny tranga sasany, tsy ny votoaty goavana rehetra no hahavita be, fa ny ankamaroan'ny votoaty lehibe dia miely amin'ny fotoana ary mifarana amin'ny fizarana amin'ny media sosialy sy sehatra hafa.
Ny votoatin'ny Super dia mifanerasera amin'ny marika misy anao
Ny soratra manahirana dia tsy misy fiantraikany aminao, tsy manosika anao izany, ary tsy manery anao. Raha ny marina dia azo lazaina ho toy ny ranomamy fotsiny izy io. Amin'ny lafiny iray, ny votoaty tsara dia afaka manao zavatra betsaka. Manangana fifandraisana, toetra ary fahatsapana izany. Raha toa ka mila ny votoatinao ianao mba ho mafana, dia tsy maintsy mahita olona iray izay mahafantatra ny fironana matihanina.
Manomboka amin'ny maha-fahefana azy izany
Ny votoatin'ny fitaovana dia tsara rafitra sy feno, zavatra iray izay manintona anao ho manam-pahaizana amin'ny sehatra. Izany dia hisarika ireo mpitaona izay mpihaino mahatsikaiky, ary rehefa manomboka manokatra ny votoatiny izy ireo, mamaky ny sehatra misy anao, ary mifandray amin'ny tranonkala hafa, dia mijinja be.
Ny votoatim-pahantranao dia tsy mendrika ny fampiasam
Ny voka-pikarohana tsy maotina sy ny votoaty dia tsy mendrika ny renivohitra mandany azy satria tsy hahavariana izy ary amin'ny farany, tsy misy mpamaky lehibe hamaky azy io. Ny votoatin-dresaka dia ho sarobidy be, saingy manana fahafahana hahatratra mpihaino goavana sy hamolavola ny marikao.